मुम्बईमा ओम पुरीको आत्मा भड्कियो: देखियो यस्तो भुत , के हो खास कुरा ? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मुम्बईमा ओम पुरीको आत्मा भड्कियो: देखियो यस्तो भुत , के हो खास कुरा ?
भारतको मुम्बईमा ६६ बर्षको उमेरमा ओम पुरीको हट एट्याकबाट मृत्यु भएको थियो। ओम पुरी एक चर्चित चरित्र अभिनेता थिए । उनको मृत्युपछि उनका लाखौँ समर्थक शोकमा डुबेका थिए। तर अहिले पाकिस्तानको एक न्यूज टिभी च्यानलले ओम पुरीको आत्मा केहि दिनदेखि मुम्बईका सडकहरुमा भड्किएको दाबी गरेका छन् ।
उक्त च्यानलको समाचारलाई मान्ने हो, मुम्बईमा अहिले एउटा छायाँ देखिने गरेको छ जुन छायाँ ओम पुरी की आत्मा जसले आफुलाई मर्ने हत्यारालाई खोजि रहेको छ। यस न्यूज टिभी च्यानलका समाचार वाचकले भनेका छन् की, ओमपुरीको आत्मालाई केहि समय पहिले देखि उनि मृत्यु हुनु पहिले बस्ने घरको वरपर देख्न थलिएको छ।
ओम पुरीको जन्म अंबालाको एक पंजाबी परिवारमा भएको थियो। १९९३ मा ओम पुरीले नन्दिता पुरीसँग बिवाह भएको थियो। २०१३ मा उनको सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो। उनको इशान नाम का एक छोरा पनि रहेका छन्। ओम पुरीले बलिउडमा मात्र हैन थुप्रै विदेशी फिल्महरुमा पनि आफ्नो दरिलो अभिनयको जादु देखाएका थिए । ओम पुरीले ब्रिटेन र अमेरिकी फिल्महरुमा पनि काम गरेका थिए । ओम पुरी र नसीरुद्दीन शाह फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट पुणेमा एकसाथ पढाई गएका हुन् ।